fella, Author at Super Union - Page2of 107
ဧရာဝတီနှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ဆုံရာ ရေလယ်ကျွန်းပေါ်ရှိ ကျေးရွာများအတွင်း စစ်ကောင်စီမှ အကြမ်းဖက်ဝင်ရောက် ထွက်ပြေးသည့် ရွာသားများအား လိုက်လံပစ်ခတ်၊ ရွာသား ၆၀၀၀ ခန့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ၊ တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းများ ခိုးယူ (ဗီဒီယိုဖိုင်)
ဧရာဝတီနှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ဆုံရာ ရေလယ်ကျွန်းပေါ်ရှိ ကျေးရွာများအတွင်း စစ်ကောင်စီမှ အကြမ်းဖက်ဝင်ရောက် ထွက်ပြေးသည့် ရွာသားများအား လိုက်လံပစ်ခတ်၊ ရွာသား ၆၀၀၀ ခန့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ၊ တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းများ ခိုးယူ (ဗီဒီယိုဖိုင်) ဧရာဝတီနှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ဆုံရာ ရေလယ်ကျွန်းပေါ်ရှိ ကျေးရွာများအတွင်း …
10/09/2021 By fella News
ဒရုန်းဒုက္ခ ၊ မအလ နဲ့ တာဝါတိုင်
ဒရုန်းဒုက္ခ ၊ မအလ နဲ့ တာဝါတိုင် နှစ်ခါမရေးချင်လို့ တာဝါတိုင်နဲ့ ဒရုန်းပေါင်းပြီး တာဝါဒရုန်းလို့ရေးတာပါ … လက်ရှိအနေအထားအရ မအလအနေနဲ့ ရင်ထဲမှာ ဘလောင်ဆူနေတဲ့ကိစ္စနှစ်ရပ် ရှိနိုင်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ် … ပထမတစ်ခုက မိုင်တဲတာဝါတိုင်တွေ အဖျက်ဆီးခံနေရတဲ့ကိစ္စပါ …
ပေါက်ကရပြော ပေါက်ကရလုပ်နေတဲ့ ချာတူးလန်အာဏာရှင် မအလ ၏လက်ရှိ ဘဝနေထိုင်နည်းနှင့် ကာကွယ်ရေးဗျုဟာ
ပေါက်ကရပြော ပေါက်ကရလုပ်နေတဲ့ ချာတူးလန်အာဏာရှင် မအလ ၏လက်ရှိ ဘဝနေထိုင်နည်းနှင့် ကာကွယ်ရေးဗျုဟာ စကစအုပ်ကြီးတွေအသတ်ခံနေရတယ် ၊ မင်းအောင်လှိုင်က စကျင်ကျောက်တုံးကြီးကို ဘုရားတည်ဖို့လုပ်နေတယ် 😁😁ဘဏ်တွေအသက်ငင်နေတယ် ၊ မင်းအောင်လှိုင်က လျှပ်စစ်ကားထုတ်ဖို့ အစည်းအဝေးလုပ်နေတယ် 😁😁 ဘဏ်တွေငြီမ်သွားအောင်ဆိုပြီး သူအားကိုးလို့ရမဲ့တစ်ကောင်ကို …
နဂါးမှန်းသိအောင် အမောက် ထောင်ပြခြင်း..( သို့မဟုတ် ) ခုခံကာကွယ်စစ် တပြည်လုံး ဆင်နွဲရန် ကြေငြာလိုက်ပြီးနောက် အခြေအနေ
နဂါးမှန်းသိအောင် အမောက် ထောင်ပြခြင်း..( သို့မဟုတ် ) ခုခံကာကွယ်စစ် တပြည်လုံး ဆင်နွဲရန် ကြေငြာလိုက်ပြီးနောက် အခြေအနေ NUG ကခုခံကာကွယ်စစ် တပြည်လုံး ဆင်နွဲရန် ကြေငြာလိုက်ပြီးနောက် အားလုံး လှုပ်လှုပ် ခါခါ ဖြစ်လာကြပါတယ်.. အားလုံးဆိုတဲ့အထဲ …
စစ်သားအယောက် တစ်ရာသေတာထက် မအလကို အသဲခိုက်အောင်နာ‌စေတဲ့ တာဝါတိုင် စစ်ဆင်ရေး…. ( သို့မဟုတ် ) မအလရဲ့ သရုပ်မှန်
စစ်သားအယောက် တစ်ရာသေတာထက် မအလကို အသဲခိုက်အောင်နာ‌စေတဲ့ တာဝါတိုင် စစ်ဆင်ရေး…. ( သို့မဟုတ် ) မအလရဲ့ သရုပ်မှန် မအလဟာ ပြည်သူတွေကိုအထင်သေးပြီး အာဏာသိမ်းခဲ့တာပါ။ ဒါက ထင်ရှားပါတယ်။ နောက်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကို မကြည့်ဘဲ အာဏာသိမ်းခဲ့တာပေါ့။ ပထမမှာ …
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသော သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ရဲ့အသက်(၆၉) နှစ်တွင် ဖြစ်လာမယ့် ကံဇာတာဟောစာတမ်း
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသော သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ရဲ့အသက်(၆၉) နှစ်တွင် ဖြစ်လာမယ့် ကံဇာတာဟောစာတမ်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ကို ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်နေ့ကတည်းကေနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် ပြည်သူတွေအားလုံးက ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ အမေစုတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် မကြာသေးခင်လောက်ကလူမှုကွန်ယက်တွင်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောစာတမ်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ ဗေဒင်ဆရာမတစ်ဦးမှ ဟောထားတဲ့ပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့လက်ရှိ ကံဇာတာကို သေချာတွက်ချက်ပြီး ဝေမျှပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဦးဝင်းမြင့်ဟာ အသက်(၇၀)ကနေ(၈၁)နှစ်အထိရာဇအရှိန်ရှိနေပါတယ် မြန်မာပြည်အတွက်အဲ့အညံ့ကနေ လွတ်သွားပါပြီဦးဝင်းမြင့်ကတောက်လျှောက်ကိုကောင်းနေတာပါအသက်(၈၀)ကျော်တဲ့အထိပါပဲလို့ …
မမြင်ရသော ရန်သူများကို ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်တဲ့ အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ ( သို့မဟုတ် ) ပြောက်ကျားစစ်ပွဲ ဒဏ်ကိုခံနေရသော မအလ
မမြင်ရသော ရန်သူများကို ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်တဲ့ အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ ( သို့မဟုတ် ) ပြောက်ကျားစစ်ပွဲ ဒဏ်ကိုခံနေရသော မအလ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ၏ တိုက်ပွဲ ခေါ်သံ နှင့် အတူ ပြည်သူတို့၏ တွန်းလှန်စစ်ပွဲများက ပြောက်ကျားစစ် …
မတရားမူကိုလက္မခံနုိင္လုိ့ ဓမၼဖက္ကိုေျပာင္းၿပီး CDM လုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္သားမိန္းမတေယာက္ရဲ့ ရင္ဖြင့္စာ
မတရားမူကိုလက္မခံနုိင္လုိ့ ဓမၼဖက္ကိုေျပာင္းၿပီး CDM လုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္သားမိန္းမတေယာက္ရဲ့ ရင္ဖြင့္စာ က်မ အမ်ိဳးသားက တပ္မေတာ္က ဦးစီးအရာရွိ(တတိယတန္း)အရာရွိတေယာက္ပါ။ February နဲ႔ March လမွာ သူကေတာ့ သင္တန္းတခုတက္ေနတာပါ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ သူ႔ကို ျပည္သူတင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အစိုးရ …
ပန်ဆယ်လို ပြောပြလာတဲ့ MyTel တာဝါတိုင်းစစ်ဆင်ရေးမှာ အသံထွက်လာတဲ့ မင်းအောင်လှိုင်အပြင် နောက်ထပ် ဘောခိုးမလေးတွေအကြောင်း
ပန်ဆယ်လို ပြောပြလာတဲ့ MyTel တာဝါတိုင်းစစ်ဆင်ရေးမှာ အသံထွက်လာတဲ့ မင်းအောင်လှိုင်အပြင် နောက်ထပ် ဘောခိုးမလေးတွေအကြောင်း စစ်တပ်ကို လုပ်ပါလား…. တာဝါတွေထိရင် ပြည်သူတွေပဲ နစ်နာတာတဲ့။ အင်တာနက်မရတော့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့။ လာလာသေး… တာဝါတိုင်တွေက ပြည်သူပိုင်တဲ့။ ဘယ်လို ပြည်သူပိုင်တာလဲ …
အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္ျပီး ေတာ္လွန္ေရးကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့လို႔ ႏွစ္ကုန္ရင္ယူမယ္ဆိုတဲ့ ခ်စ္သူနဲ႔နဲ႔ေဝးကြာခဲ့ရတယ္ အခ်စ္ရဆုံးမိသားစုက အေမြျဖတ္စြန႔္လႊတ္တယ္တဲ့လူငယ္ေလး
အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္ျပီး ေတာ္လွန္ေရးကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့လို႔ ႏွစ္ကုန္ရင္ယူမယ္ဆိုတဲ့ ခ်စ္သူနဲ႔နဲ႔ေဝးကြာခဲ့ရတယ္ အခ်စ္ရဆုံးမိသားစုက အေမြျဖတ္စြန႔္လႊတ္တယ္တဲ့လူငယ္ေလး ေတာ္လွန္ေရးကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့လို႔ ႏွစ္ကုန္ရင္ယူမယ္ဆိုတဲ့ ခ်စ္သူနဲ႔နဲ႔ေဝးကြာခဲ့ရတယ္ အခ်စ္ရဆုံးမိသားစုက အေမြျဖတ္စြန႔္လႊတ္တယ္… ေတာ္လွန္ေရးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့လို႔ ႏွစ္ကုန္ရင္ယူမယ္ဆိုတဲ့ ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔ေဝးကြာခဲ့ရတယ္ 6ႏွစ္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ စြန႔္ခြာခဲ့ရတယ္ အခ်စ္ရဆုံးမိသားစုက …
09/09/2021 By fella News